Jumlada 2.5D High Clear Anti-Boodh Muraayada Muraayada Muraayadda ee iPhone 12 taxanaha Soosaaraha iyo Alaab-qeybiye | OTAO
Qeexid-Sare-Anti Boodh-Ultra oo dhumucdiisuna tahay 0.33 waxay hubisaa xasaasiyadda shaashadda taabashada asalka ah. Hufnaan sare ayaa u oggolaanaysa ugu fiican, waayo-aragnimo muuqaal dabiici ah
Si gaar ah loogu qaabeeyey bir mesh ka hortagga boodhka si looga ilaaliyo boodhka
Daawada Oleophobic waxay ka ilaalisaa faraha iyo iskudhafka si shaashadu u ahaato mid nadiif ah oo muuqaal fiican leh.
100% xabagta bilaa xumbada ah waxay bixisaa rakibid aad u fudud
Filimka Khariidadda ah - Haddii muraayadda qaboojiyaha ah la jabiyo, waxay u kala jajabaysaa qaybo yaryar oo aan fiiqnayn, taasoo ka dhigaysa mid ammaan u ah dadka isticmaala
Baakado badan oo ilaaliya shaashadda taleefanka gacanta ayaa calaamadeyn doona "gudbinta 99%", bayaankan kuma salaysna sayniska, wuxuuna khiyaanayn karaa macaamiisha iyo dabeecaddooda wax iibsiga. Caddaynta dhabta ah ee gudbinta shaashadda muraayadda muraayadda ah ayaa qiyaastii ah 90%. Laakiin ilaaliyaha shaashadda muraayadda leh ee OTAO wuxuu gaari karaa 92% gudbinta iyadoo la adeegsanayo muraayad heer sare ah iyo xabagta AB, taasoo ku siinaysa khibradaada wanaagsan
Hore: 2.5D 0.33mm Caddaraa Muraayada Muraayadaha loogu talagalay iPhone 12 taxanaha
Xiga: 2.5D Anti Blue Light Muraayadaha Muraayadaha Muraayadda ee iPhone 12 taxanaha
2.5D 0.33mm Caddaraa Muraayada Dabacsan ee loogu talagalay iPhone 12 ...